तब न केपी ओली ! त्यसै भएको हैन् भारतमा राष्ट्रपतिको अपमान | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← निर्वाचन सुरक्षा चुस्त पार्न सुरक्षा प्रमुखहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन
“भन्देउ न के गरुँ चोखो माया पाउन”बोलको गितको म्यूज़िक भिडीयो यूट्यूब मार्फ़त सार्वजनिक →
तब न केपी ओली ! त्यसै भएको हैन् भारतमा राष्ट्रपतिको अपमान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो विदेश भ्रमण नै विवादमा फसेको छ । छिमेकी देश भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा पाँचदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा सोमबार नयाँदिल्ली पुगेकी राष्ट्रपतिलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ । भारतले कनिष्ठ राज्यमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पठाएर राष्ट्रपतिको मात्र अपमान गरेको छैन्, सम्पूर्ण नेपालीको नै शिर निहुराउने काम गरेको छ ।
भारत जानुअघि राष्ट्रपति भण्डारीलाई निकै तामझामका साथ त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदाई गरिएको थियो । ३३ सदस्यीय टोलीसहित भारत गएकी भण्डारीलाई भारतको विमानस्थलमा भारतका महिला तथा बाल विकास राज्यमन्त्री कृष्ण राजले स्वागत गरिन् । त्यो तस्वीर देखेर धेरै नेपालीको मन कुँडिएको छ । झन् अपमान नै सहने राष्ट्रपति भण्डारीलाई कस्तो महसुस भइरहेको होला ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका राष्ट्रपति राष्ट्रपतिलाई भारतमा एउटा कनिष्टस्तरको मन्त्रीबाट स्वागत हुनुले भारतले नेपाललाई हेर्ने नजर प्रष्ट भएको छ । जबकी गत कात्तिकमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा उनको स्वागतका लागि भने नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीसहित सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए । मुखर्जी आएको हर्षबडाईंमा सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिएको थियो । जनताले चर्को विरोध गर्दागर्दै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त्यतिबेला लाचार बनेको थियो ।
नेपालका राष्ट्रपति भारतमा जाँदा सार्वजनिक बिदा दिने त सपनाकै कुरा भयो, तर अति नजिकको छिमेकी नेपाललाई भारतले यतितल्लो स्तरको व्यवहार गरेको छ कि जसले सार्वभौम नेपालको आत्मसम्मानमा ठेस लागेको छ । भारतले नजानेर यस्तो व्यवहारको गरेको हो ? या भारतीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरु व्यस्त भएर हो त ? होइन् । एकसाताअघि मात्रै बंगलादेशको प्रधानमन्त्री हिसिना शेख भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम् विमानस्थलमा पुगेर उनको स्वागत गरेका थिए । जसले भारतमा निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो । उनको भ्रमणमा भारतले देखाएको सम्मानले बंगलादेश भारतप्रति निकै सकारात्मक बनेको थियो ।
तर, नेपालको राष्ट्रपति जाँदा भने भारतले सरकारकै अति ‘जुनिएर’ मन्त्रीलाई पठाएर नेपालको हैसियत देखाइदिएको छ । नेपालकी राष्ट्रप्रमुखलाई अपमानको विष खुवाएको छ । भारतले जानाजान नेपालप्रति यो व्यवहार देखाएको हो । किनकी उसले नेपालप्रति सँधै हेपाहा व्यवहार र कूदृष्टि लगाउँदै आएको छ ।
भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लडेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वागतमा समेत विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज आएकी थिइन् । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्वागत गर्न पनि विदेशमन्त्री स्वराज नै आएकी थिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वागतमा झन् तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नै बिमानस्थलमा आएका थिए । तर, यसपटक भारतले नेपालकी राष्ट्रपतिलाई राज्यमन्त्री पठाउनु संयोगमात्रै होइन् । उसको हेपाहा नीतिको निरन्तरता हो ।
तब न केपी ओली
राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि नै भारत भ्रमणमा जान लागेकी थिइन् । भारत सरकारको निम्तामा नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएका थिए । ओलीको त्यतिबेलाको कदमको कतिपयले चर्को विरोध समेत गरेका थिए । तर, त्यतिबेलाको उनको कदम सही थियो भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ । उनले भारतीय रबैयालाई आंकलन गरेर नै त्यतिबेला आकस्मिक निर्णय लिएको अहिले घटनाक्रमले छर्लंग पारेको छ ।
भारत मात्रै दोषी हो त ?
भारतमा राष्ट्रपति भण्डारीको अपमान हुनुमा स्वयम् नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरु दोषी छन् । हामीलाई स्वाभिमानको बाटो हिँड्ने आधार हाम्रै देशका भारतको पाउ पर्ने नेताहरुले नै दिएका छैनन् । त्यतिमात्रै नभई नेपालको नुन खाएर भारतको पाउ मोल्ने भारतीय दलाल प्रवृत्तिको पनि यसमा ठूलो हात छ । जनकपुरको जानकी मन्दिरमा नेपालका राष्ट्रपति पूजा गर्न जाँदा नानाथरी गाली गर्ने तर भारतीय राष्ट्रपति त्यहाँ जाँदा भव्य स्वागत सत्कार गर्ने दलाल प्रवृत्तिका नागरिकका कारण नेपालीमाथि भारतले यसरी अपमान गरिरहेको छ ।
भारतले त नेपालीको हैसियत बताइदिएको मात्र हो । उसले हैसियत अनुसारको विदेश नीति बनाउने गर्छ । विदेश नीतिका विषयमा सबै एकभएर लाग्छन् । तर, हाम्रा देशका नेताहरु कुर्सी र सत्ताका लागि सबै कुरा भारतलाई सुम्पन तयार हुन्छन् । भारतकै अन्नपानी मात्रै खान्नन्, छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनेदेखि उपचार खर्चसम्म भारतकै खर्चमा गर्छन् । अझ भारतीय इशारामा पार्टी फोर्नेदेखि सत्ताको चाबी समेत लगेर बुझाउने काम गर्छन् । त्यही प्रवृत्ति देखेर भारतले नेपालीको स्वाभिमानमा लात हानिरहेको छ । आफ्नो पाहुनालाई समेत सम्मान दिन नसक्ने भारतले नेपालीको स्वाभिमानको के हेक्का राखोस ?
नेपाल सरकारसँधै भारतको मनोभावना बुझेर चल्न खोज्छ । यसको फाइदा भारतले यसरी लिँदैछ । आफ्नो देशको राष्ट्रपतिमाथि भारतमा अपमान हुँदा जनतालाई यसरी अपमानित महसुस हुन्छ भने स्वयम् भोग्ने (राष्ट्रपति) लाई कस्तो महसुस भयो होला ? किनकी भारतले यस्तो व्यवहार एकपटक नभई पटक–पटक दोहोर्याइरहेको छ । नेपालले यो र यसअघिका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । हैन् भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका जनताले सँधै यसैगरी भारतको अपमान सहनुपर्ने स्थिति हुनेछ । सकिन्छ भने अपमानको विष पिएर भएपनि राष्ट्रपतिको भ्रमण छोट्याएर छिटो नेपाल फर्काउनुपर्छ ।
( दैनिक )